KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language French Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mbunda Mexican Sign Language Mongolian Myanmar Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Mewaree Sophia * no, mfe 39 akyi, yare bi a na atena ne so akyɛ twaa ne nkwa so. Me nnamfo boaa me pa ara, na me nso mantena hɔ kwa, mmom mepɛɛ biribi de me bere yɛe. Nanso afe mua, na megye me ho a ennye; awerɛhow nko ara. Ɛyɛ a na awerɛhow no ayɛ kɛse, ɛyɛ nso a na ɛso atew; na minhu nea menyɛ me ho mpo. Seesei a merekasa yi, me yere wui no, mfe mmiɛnsa atwam. Ɛno mpo, ɛwom ara a awerɛhow tumi hyɛ me so mpofirim.”​—Kostas.
Woahwere wo dɔfo bi wɔ owu mu anaa? Sɛ saa a, ebia wo nso wote nka te sɛ Kostas. Yɛreka nneɛma a ɛma obi koma bubu anaa ɛma adwinnwen hyɛ obi so a, emu baako pa ara ne sɛ onii no bɛhwere ne yere, ne kunu, n’adamfo bi a ɔdɔ no, anaa ne busuani. Animdefo bi asua awerɛhow a owu de ba ho ade, na wogye tom sɛ nea yɛreka yi yɛ nokware. Nhoma bi ka sɛ, “sɛ obi biribi wu a, ɛyɛ a ɔte nka sɛ wahwere ade kɛse pa ara, na ɛnyɛ ade a ne nsa betumi aka bio.” (The American Journal of Psychiatry) Sɛ obi biribi wu na odi yaw kɛse saa a, ebia obebisa sɛ: ‘Medi awerɛhow sei ara akosi da bɛn? Enti m’ani bɛsan agye bio? Dɛn koraa na ɛbɛma me ho atɔ me?’
Nyan! yi bɛma yɛanya saa nsɛmmisa no ho mmuae. Sɛ wo dɔfo bi wui nkyɛe a, asɛm a edi hɔ no bɛma woahu nea ɛsɛ sɛ wohwɛ kwan. Nsɛm a aka a ebedidi so no bɛma woahu nneɛma a ebetumi aboa wo ama w’awerɛhow no so atew.
Yegye di pa ara sɛ, obiara a ne dɔfo bi awu ma enti ɔredi awerɛhow no, nsɛm a edidi so no bɛkyekye ne werɛ na aboa no.
^ nky. 3 Wɔasesa edin no bi wɔ nsɛm a edidi so yi mu.
Ɔhaw ne atenka ahorow bi wɔ hɔ a, obiara a ne dɔfo awu tumi fa mu. Ebi ne sɛn?
Share Share Obi Biribi Wu a, Ɛyɛ Yaw Pa Ara